ထူးထူးဆနျးဆနျးအပွုအမူမြားနဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကို ကာကှယျနကွေသညျ့ အိန်ဒိယမှလူတဈစု။ – SoShwe
Home/Other/ထူးထူးဆနျးဆနျးအပွုအမူမြားနဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကို ကာကှယျနကွေသညျ့ အိန်ဒိယမှလူတဈစု။
ထူးထူးဆနျးဆနျးအပွုအမူမြားနဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကို ကာကှယျနကွေသညျ့ အိန်ဒိယမှလူတဈစု။
So Shwe March 24, 2020	Other Leaveacomment
အိန်ဒိယနိုငျငံမှ ဟိန်ဒူဘာသာဝငျတဈစုသညျ နှားရဲ့ကငျြငယျရညျကိုသောကျသုံးခွငျးဖွငျ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကို ကာကှယျနိုငျမညျဟု ယူဆနကွေပါတယျ။ လကျရှိအခြိနျ၌ ကမ်ဘာအနှံ့ ကူးစကျပြံ့နှံ့လကျြရှိသညျ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကို ကုသနိုငျသညျ့ဆေးမရှိသေးပမေယျ့ အိန်ဒိယနိုငျငံမှ အဆိုပါလူမြိုးစုမြားမှာမူ သူတို့ရဲ့ ကိုယျပိုငျယုံကွညျခကျြဖွငျ့ ပှဲတျောပွုလုပျပွီး နှားရဲ့ကငျြငယျရညျကို သောကျသုံးခဲ့ကွခွငျးဖွဈပါတယျ။
သတငျးမြားရဲ့ဖျောပွခကျြအရ ဟိန်ဒူဘာသာဝငျမြားသညျ အိန်ဒိယနိုငျငံ၊ နယူးဒလေီမွို့၌ စုဝေးကာ နှားရဲ့ကငျြငယျရညျကို အတူတကှ သောကျသုံးခဲ့ပွီး အခြို့သောသတငျးမြားရဲ့ဖျောပွခကျြအရ တဈနိုငျငံလုံးရှိ ဟိန်ဒူဘာသာဝငျအားလုံးက ယခုကဲ့သို့ ယုံကွညျနကွေကွောငျး သိရှိရပါတယျ။ အဆိုပါပှဲတျောကို “gaumatra party” သို့မဟုတျ “cow urine party” ဟုနာမညျပေးထားပွီး ထူးဆနျးသညျ့အရညျက ဘကျတီးရီးယားမြားကို ကာကှယျပေးနိုငျသညျဟု ယူဆကာ ယခုကဲ့သို့ နှားကငျြငယျရညျမြားကို သောကျသုံးခဲ့ကွခွငျးဖွဈပါတယျ။
အဆိုပါပှဲသို့ တကျရောကျလာသူတဈဦးဖွဈသူ Hari Shankar Kumar က “နှားရဲ့ ကငျြငယျရညျကို သောကျသုံးထားသူ မညျသူမဆို ဒီရောဂါကွီးရဲ့ ဘေးအန်တရာယျက ကငျးဝေးပါလိမျ့မယျ။” ဟု ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ လူမှုကှနျရကျမြား၌ ယခုပှဲတျောနဲ့ ပတျသကျ၍ ထငျမွငျခကျြအမြိုးမြိုးထှကျပျေါနပွေီး လူမှုကှနျရကျအသုံးပွုသူမြားက အဆိုပါပှဲသို့တကျရောကျခဲ့ကွသူမြားကို ရူးနှမျးနသေူမြားအဖွဈ သမုတျခဲ့ကွကွောငျးလညျး သိရှိရပါတယျ။
လကျရှိအခြိနျ၌ ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ခြုပျ (WHO) က ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကူးစကျမှုနှုနျး လြော့ကစြရေနျအတှကျ လူစုလူဝေးမပွုလုပျရနျ၊ တဈဦးနဲ့တဈဦး (၃) ပအေကှာမှ နထေိုငျရနျ ညှနျကွားထားပမေယျ့ ယခုကဲ့သို့ လူအမြားအပွား စုဝေးခဲ့ခွငျးအပျေါလညျး ဝဖေနျမှုမြားထှကျပျေါနပေါတယျ။
ထူးထူးဆန်းဆန်းအပြုအမူများနဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ကာကွယ်နေကြသည့် အိန္ဒိယမှလူတစ်စု။
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တစ်စုသည် နွားရဲ့ကျင်ငယ်ရည်ကိုသောက်သုံးခြင်းဖြင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ကာကွယ်နိုင်မည်ဟု ယူဆနေကြပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်၌ ကမ္ဘာအနှံ့ ကူးစက်ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ကုသနိုင်သည့်ဆေးမရှိသေးပေမယ့် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ အဆိုပါလူမျိုးစုများမှာမူ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ချက်ဖြင့် ပွဲတော်ပြုလုပ်ပြီး နွားရဲ့ကျင်ငယ်ရည်ကို သောက်သုံးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းများရဲ့ဖော်ပြချက်အရ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ နယူးဒေလီမြို့၌ စုဝေးကာ နွားရဲ့ကျင်ငယ်ရည်ကို အတူတကွ သောက်သုံးခဲ့ပြီး အချို့သောသတင်းများရဲ့ဖော်ပြချက်အရ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အားလုံးက ယခုကဲ့သို့ ယုံကြည်နေကြကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ အဆိုပါပွဲတော်ကို “gaumatra party” သို့မဟုတ် “cow urine party” ဟုနာမည်ပေးထားပြီး ထူးဆန်းသည့်အရည်က ဘက်တီးရီးယားများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်ဟု ယူဆကာ ယခုကဲ့သို့ နွားကျင်ငယ်ရည်များကို သောက်သုံးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါပွဲသို့ တက်ရောက်လာသူတစ်ဦးဖြစ်သူ Hari Shankar Kumar က “နွားရဲ့ ကျင်ငယ်ရည်ကို သောက်သုံးထားသူ မည်သူမဆို ဒီရောဂါကြီးရဲ့ ဘေးအန္တရာယ်က ကင်းဝေးပါလိမ့်မယ်။” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ လူမှုကွန်ရက်များ၌ ယခုပွဲတော်နဲ့ ပတ်သက်၍ ထင်မြင်ချက်အမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်နေပြီး လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူများက အဆိုပါပွဲသို့တက်ရောက်ခဲ့ကြသူများကို ရူးနှမ်းနေသူများအဖြစ် သမုတ်ခဲ့ကြကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်၌ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ် (WHO) က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုနှုန်း လျော့ကျစေရန်အတွက် လူစုလူဝေးမပြုလုပ်ရန်၊ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး (၃) ပေအကွာမှ နေထိုင်ရန် ညွှန်ကြားထားပေမယ့် ယခုကဲ့သို့ လူအများအပြား စုဝေးခဲ့ခြင်းအပေါ်လည်း ဝေဖန်မှုများထွက်ပေါ်နေပါတယ်။
Previous ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈသတိပေးခကျြကိုလကျမခံဘဲ လူစုလူဝေးနဲ့ပါတီပေးခဲ့သညျ့ ကောလိပျကြောငျးသားမြား။
Next ?????????????????????? ?????????????????????????